Home News Yarisow: Bishaan mushaarka shaqaalaha dib ayuu u dhacaya, qasnada lacag kuma jirto!
Yarisow: Bishaan mushaarka shaqaalaha dib ayuu u dhacaya, qasnada lacag kuma jirto!
Gudoomiyaha Gobolka Banadir ayaa u sheegay maamulka Hay’adaha Gobolka Banadir in ay u sheegyaan shaqaalahooda in mushaarka bisha Agoosto uu ka soo daahayo sababtoo ah qasnadda Gobolka Banadir lacag kuma jirto. Ma aha markii ugu horeeysay oo mushaar ka soo daaho ama loowaayo shaqaalaha Gobolka Banadir. Madaama canshuurta wali laga qaaday shacabka gobolka Banadir halkee la geeyay lacagtii Gobolka? Inkastoo uu ka gaabsaday meesha lacagtii mushaarka ka baxday hadana waxaa la cadeeyay in RW Kheyre lacagtii shaqaalaha Gobolka banaadir u qaatay Garowe.
Shalay galabkii ayaa ugu danbeeysay markii Wasiir Bayleh boorso lacag ah u qaaday Garowe. Ilaa intee la’eg ayaa shacabka ku dhaqan Gobolka Banadir canshuurtooda lagu fushanayaa dano gaar ah.
Previous articleSalaadiinta Puntland: “..wiilkaa madaxa yar yaanu naga bur-burin dowladii 20ka sano aanu soo dhisaynay”
Next articleWaxaa Goordhaw la dilay Madaxii shirkadda Startup Grind ecosystem, Maxmed Shiikh
Siyaasi Si weeyn o Weeraray Farmaajo”Shacabka ayaan loo been sheegin”